Lekki Conservation Luxury Palace ene-pool & gym - I-Airbnb
Lekki Conservation Luxury Palace ene-pool & gym
- 24/7 unikezelo lwamandla luqinisekisiwe
-Igumbi lokulala eliNtsha eli-5 eliDityanisiweyo kwiNdlu yoLondolozo lweNkundla
-I-Estate eneenkonzo ezigcweleyo eneGym kunye nepool yokuQubha
- 24/7 uKhuseleko oluPheleleyo lubandakanya amaPolisa axhobileyo
-Ububanzi beFayibha engenamkhawulo
- Yiva indalo kunye neLekki Conservation Park ngaphaya kwendlela ukusuka kwi-Estate
-Imizuzu eli-15 ukusuka kwi-VI, imizuzu eyi-10 ukusuka kwiivenkile ezinkulu zakwa-shoprite, imizuzu emi-5 ukuya kwivenkile yasekhaya kunye nokuhanjiswa simahla ekhaya
-NgeChevron eLagos-Epe indlela ekhawulezayo ngaphambi kwe-2nd Tollgate
- Indawo eMahala yezikhukula kunye nokuzola
Inebhafu yespa, iLekki Conservation Luxury Place eneGym kunye nePool isetiwe eLagos. Indawo yokuhlala ene-air-conditioning yimizuzu embalwa ukusuka kwi-Nike Art Gallery ngemoto kwaye iindwendwe zixhamla kwi-WiFi encomekayo kunye neendawo zokupaka zabucala ezikhoyo kwisiza.
Ikhaya leholide linamagumbi okulala ayi-5, iTV enescreen esisicaba esineenkonzo zokusasaza, kunye nekhitshi elixhotyiswe ngemicrowave kunye nefriji/isikhenkcezisi saseMelika, umatshini wokuhlamba impahla/isixhobo esomileyo, kunye namagumbi okuhlambela ayi-5 anebhafu eshushu. Ukwenza lula okongeziweyo, ipropathi ibonelela ngeetawuli kunye nelinen yebhedi ngaphandle kwentlawulo eyongezelelweyo.
Indawo yokuphila kakuhle kwikhaya leeholide iqulathe iphuli yangaphakathi kunye neziko lokomelela. I-terrace iyafumaneka kwiindwendwe eLekki Conservation Luxury Place ukuze zisetyenziswe.
IMega Plaza Century 21 Mall yimizuzu embalwa ukusuka kwindawo yokuhlala, ngelixa iMarike yeLekki ikumgama weekhilomitha ezimbalwa.
Le Estate ikufuphi neLekki Conservation Centre
Imizuzu eli-10 ukusuka kwaShoprite
Imizuzu eyi-10 esuka kwiMega Chicken
Imizuzu eli-15 ukusuka kwiVenkile yakwaSpar
Iyafumaneka efowunini, kuwhatsapp nakwi-imeyile
Thembisa ukubuya ngeyure enye